Akanakisa ekurapa CE madzimai kubviswa bvudzi muchina / diode 808 laser ongororo Mugadziri uye Fekitori | KES
Chiremba CE vakadzi vakadzi vobvisa bvudzi muchina / diode 808 laser ongororo
Wavelength 808nm Standard755nm, 1064nm, Tri-wavelength inosarudzika
Chinoshanduka Spot saizi 9 * 9, 12 * 12, 12 * 18 sarudzo
·Safe uye Inonyaradza, Double Bhenefiti
Laser Bvudzi Kubvisa Machine Mutengo neakaviri TEC Anoshanda Kutonhora Modular kunounza mapatya kutonhora mhedzisiro. Kaviri TEC inotanga kushanda kana tembiricha yemvura iri pamusoro pe25 ° C, kuve nechokwadi tembiricha yemvura iri pakati pe25 ° C kusvika 30 ° C, nesafiri yakachena inotonhorera zvakakwana. Mune ino kesi, iyo yakachengeteka uye yakasununguka kurapwa inowanikwa. Yakakura kwenguva refu yekushanda nguva ichawedzera bhizinesi rako.
·Easy Kubata uye Akangwara Diagnostic System
Laser Bvudzi Kubvisa Machine Mutengo neyakareruka kubata software inopa inokurudzirwa maseturu emhando dzakasiyana dzeganda uye vhudzi mavara kupedzisa vashandisi, zvinoita kuti oparesheni isazonetsa zvakare. Smart zvikanganiso zvekuongorora system inopa Kushanda Mazano ezvakakosha zvinhu senge mafeni, pombi uye kutonhora system. Hafu yenguva yako uye mutengo woisa mari mushure mekutengesa sevhisi.
Medical CE yakanakisa laser bvudzi kubvisa mudziyo / shr d ...
Medical CE ipl laser bvudzi kubvisa nhare / yakanakisa ...
Medical CE laser bvudzi kubvisa mwenje bvudzi / laser ...
Mushonga CE bvudzi kubvisa muchina wevakadzi / kurwadziwa ...